गतिलाे महामूर्ख खाेज्दै छाैंँ
सुजीतकुमार झा जनकपुर, २४ फागुन
होलीको अवसरमा जनकपुरधाममा हुने महामूर्ख सम्मेलनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । मैथिली भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति क्षेत्रमा कार्य गर्ने देशको अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको मिथिला नाट्य कला परिषद् (मिनाप) जनकपुरधामले आयोजना गर्ने सो सम्मेलनको तयारी कुन रूपमा भइरहेको छ ? यसपालि महामूर्खको उपाधि कसले प्राप्त गरिरहेका छन् ? यस विषयमा मिनाप अध्यक्ष परमेश्वर झासँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानी :
महामूर्ख सम्मेलनको तयारी कसरी चलिरहेको छ ?
महामूर्ख सम्मेलन मिथिला नाट्य कला परिषद्को मात्र नभई जनकपुरधामकै ठूलो कार्यक्रममध्ये एक हो । त्यस कारण त्यही रूपमा यसको तयारी भइरहेको छ ।
अरू वर्ष जस्तै जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा २ वटा मञ्च बनाइनेछ । सो मञ्चमा मूर्ख, महामूर्खहरू बस्नेछन् । अहिले महामूर्खलगायत विभिन्न मूर्खहरूको खोजी भइरहेको छ ।
यसपालि महामूर्ख कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
कसलाई महामूर्ख बनाइनेछ भनेर अहिले भन्न सकिन्न । यसका लागि मिनापले प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि छनोट समिति बनाएको छ । त्यही छनोट समितिकै निर्णयअनुसार महामूर्ख बनाइनेछ ।
महामूर्खका अतिरिक्त एक दर्जन मूर्खहरूलाई उपाधि प्रदान गरिनेछ । सञ्चार माध्यममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, पूर्वमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिलगायतको चर्चा रहेको छ । तर, यसको निर्णय छनोट समितिले नै गर्नेछ ।
प्रायः नेताहरूलाई नै महामूर्खको उपाधि प्रदान गर्नुहुन्छ, यसको कारण के होला ?
त्यस्तो छैन । सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू महामूर्ख बनिरहेका छन् । नरेश ठाकुर, डा. राजेन्द्र विमल, रामभरोस कापडी, पवन सिङ्घानिया, सिके लालमध्ये कोही राजनीति क्षेत्रका हुनुहुन्न ।
तर, राजनीतिलाई साइडमा राखेर पनि कुनै कार्यक्रम गर्न सकिन्न । रामचन्द्र झा, लालकिशोर साह, शत्रुधन महतो, डा. विजयकुमार सिंह राजनीति क्षेत्रकै व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि हामीले महामूर्ख बनाएका छौँ ।
यस कार्यक्रमका माध्यमले सबैलाई जोड्नु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । यो एक प्रकारले सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा पनि रहेको छ । यस उत्सवको माध्यमले यस क्षेत्रको विकास गर्नु पनि लक्ष्य रहेको छ ।
महामूर्खलाई उपाधिमा के दिनुहुन्छ ?
यो कार्यक्रम विशुद्ध रूपले व्यंग्यात्मक रहेकाले व्यंग्य बुझाउने खालको माला लगाउने गरिएको छ । हुनत महामूर्ख भनेर एउटा प्रमाणपत्र पनि हामी दिने गर्छौं । मालामा कहिले तरकारी वा अन्य कुरा पनि हामी राख्ने गर्छौं ।
महामूर्खको उपाधिप्राप्तले यस उपाधिलाई निकै महत्त्वका साथ लिने गर्छन् । वर्षौं पहिला १ जनालाई महामूर्ख बनाइएको थियो । उहाँ महिना, २ महिनामा सम्मानहरू पाइरहनुहुन्छ तर उहाँको घरमा धेरै प्राथमिकताका साथ हामीले दिएको प्रमाणपत्र राखिएको छ ।
महामूर्ख बन्न केहीले सोर्स लगाएको पनि सुनिन्छ, यसमा कतिको सत्य छ ?
त्यस्तो छैन । सोर्स त लगाउँदैनन् तर धेरैको चाहना हुन्छ– मलाई पनि उपाधि प्राप्त होस् । मिडिया १ साताअघिदेखि नै चर्चा चलाउने गरेकाले पनि यसको उत्सुकता पहिलादेखि नै बनेको हुन्छ । अहिले नै पान पसल, चिया पसल सबै ठाउँमा महामूर्खको चर्चा हुन थालेको छ ।
महामूर्ख सम्मेलन कसरी सुरु गर्नुभयो ?
पहिला वीरगञ्जमा महामूर्ख सम्मेलन हुन्थ्यो । महामूर्खका समाचारहरू हामी पनि सुन्थ्यौँ । त्यसैबाट प्रभावित भएर हामीले सुरु गरेका हौँ । तर, यहाँ सुरु हुँदा सबै ठाउँका कार्यक्रम ओझेलमा परे ।
जानकी मन्दिर जस्तो ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा स्थान सानो भइरहेको छ । स्थानीय र राष्ट्रिय मिडियाले यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका हुन्छन् ।
महामूर्ख सम्मेलनमा मात्रै उपाधि प्रदान गर्नुहुन्छ वा अन्य कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ ?
होलीको बेला जनकपुरधाममा हामी २ दिन कार्यक्रम गर्छौं, पहिलो दिन होरैया गायन र दोस्रो दिन महामूर्ख सम्मेलन । महामूर्ख सम्मेलनका दिन होलीका गीत, व्यंग्यात्मक कविता पनि हुने गरेको छ ।
हामीकहाँ कति प्रतिभाशाली कविहरू छन्, त्यो पनि देख्न सकिन्छ । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूका अतिरिक्त जनकपुरधाम क्षेत्रका अधिकांश विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता हुने गर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २४, २०७६, ०८:४६:००
घरको विवाह ! न जन्ती चाहिने, न बेहुला–बेहुली
१ बजे उच्चस्तरीय र ४ बजे मन्त्रिपरिषद्, लकडाउन बढाइँदै
लकडाउनका कारण मिथिलाञ्चलको चैती छठ प्रभावित
‘लकडाउन’ पालना नभएपछि रौतहटमा ‘सटडाउन’
डाँका मुद्दामा १ वर्ष कैद सजाय पाएका व्यक्ति एकै दिनमा मुक्त
‘लकडाउन’मा प्रदेश २ सरकारले मजदुरलाई खाना खुवाउँदै
काेराेना संक्रमणबाट जाेगिन स्थानीयले लगाए ढाट
स्थलमार्ग राेकिएपछि महाकालीमा पौडिदै नेपाल छिरे १ युवक
वीर अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत काठमाडौंकी एक युवतीको मृत्यु
पाटन अस्पतालको आईसीयूमा राखिएका धादिङका १ व्यक्तिको मृत्यु